Akụkọ - Ihe kpatara ịma jijiji na mkpọtụ nke sistemụ hydraulic na usoro mkpochapụ ha
E nwere ọtụtụ isi mmalite nke mkpọtụ na mkpọtụ na sistemụ hydraulic, gụnyere sistemụ arụmọrụ, nfuli hydraulic, valvụ hydraulic na pipeline. Omume ọma na mkpọtụ nke sistemụ igwe ihe na-akpata ụda na mkpọtụ nke sistemụ igwe na-ebute site na usoro nnyefe nke na-ebugharị mgbapụta hydraulic, ọkachasị n'akụkụ ndị a.
1. Iguzighi ezi nke aru na-agbanwe agbanwe Na ngwa ndị bara uru, ihe ka ọtụtụ n'ime motọ ahụ na-ebugharị mgbapụta hydraulic site na njikọta. O siri ike ime ka ahụ ndị a na-agbagharị agbatị zuru oke. Ọ bụrụ na ekweghị ekwe dị oke oke, ọ ga-agbagharị Mgbe ị na-ebute nnukwu ekwe vibration nke n'usoro n'usoro na-amụba mkpọtụ.
2. Nwụnye na-ezighi ezi Usoro hydraulic na-ebutekarị ịma jijiji na mkpọtụ n'ihi nsogbu nrụnye. Dịka nkwado ọkpọkọ adịghị mma na ntụpọ ntọala, ma ọ bụ mgbapụta hydraulic na igwe akwara adịghị arụkọtara ọnụ, njikọta ahụ agbasaghị, ndị a ga-eme ka mkpọtụ na mkpọtụ ka ukwuu.
3. Mgbe mgbapụta hydraulic na-arụ ọrụ, ọ bụrụ na mgbochi nke ọkpọ mmiri na-arụ mmanụ dị oke, n'oge a, mmanụ hydraulic na-egbu oge iji mejupụta oghere mmanụ nke mgbapụta ahụ, na-eme ka agụụ na-adịghị mma na mmịpụta mmanụ. oghere na-eme nrụgide na-adịghị mma. Ọ bụrụ na nrụgide a na-erute ikuku mmanụ Mgbe nrụgide ahụ dị iche, ikuku nke mbụ gbazee na mmanụ ga-ebute ya na nnukwu ego, na-akpụ ọnọdụ efu nke ikuku. Ka mgbapụta ahụ na-agbagharị, mmanụ a na-egosipụta ikuku na-ebufe ya na mpaghara nrụgide dị elu, a na-ebutekwa ikuku ikuku site na nrụgide dị elu. Gbanyụọ, gbajie ma pụọ ​​n'anya, na-eme ka ujo dị elu dị elu
Specificzọ a kapịrị ọnụ bụ:
1. Ngwunye ọkpọkọ ọkpọkọ nke mgbapụta kwesịrị ka emechi ya iji gbochie ikuku ikuku;
2. Iji ezi uche chepụta mmanụ ụgbọ ala. Na-egbochi cavitation na hydraulic valves A na-emekarị cavitation nke hydraulic valves iji belata nkwụsị nsị nke mgbapụta ahụ. Ihe a na-ejikarị eme ihe gụnyere iji ọkpọkọ mmiri na-ebu ibu, nnukwu ikike nha, na n'otu oge ahụ iji zere ikpuchi mmanụ mmanụ; mmị elu nke mgbapụta ahụ kwesịrị ịdị ntakịrị dị ka o kwere mee.
3. Gbochie ọgbọ ọgbaghara na ịgbagharị na paịpụ. Mgbe ị na-emepụta pipeline sistemụ hydraulic, ngalaba ọkpọkọ kwesịrị ịnwa izere mmụba na mberede ma ọ bụ nkwekọrịta; ọ bụrụ na ejiri paịpụ gbagọrọ agbagọ, okirikiri ntụgharị ya kwesịrị ịdịkarịa okpukpu ise ọkpọkọ ọkpọkọ. Usoro ndị a Ha abụọ nwere ike igbochi ọgbọ nke ọgba aghara na ịgbagharị na pipeline.
A na-ejikarị ihe ndị dị ike eme ihe iji nye ndị na-eme ihe ike, karịsịa nfuli hydraulic. Mgbe mmiri mmiri na-emepụta gafere site na njikwa na ngwaọrụ ndozi (hydraulic valves dị iche iche) na ndị na-eme ihe, ndị na-eme ihe nwere ike mezue ụfọdụ omume, dị ka hydraulic cylinders. Telescopic ma ọ bụ hydraulic moto rotation!